Ndị ozi ala ọzọ nke ebere - WRSP
MISSARIARIES nke ọrụ ebere
1910 (August 26): Agnes Gonxha Bojaxhiu mụrụ na Skopje, Macedonia.
1919: Nikola Bojaxhui, nna Agnes Gonxha, nwụrụ n'okpuru ọnọdụ enyo.
1928: Bojaxhiu sonyeere Loreto Sisters of Dublin.
1929: Gonxha malitere ọkwa ya na Darjeeling, India. Ọ malitekwara izi ihe na St Mary's High School dị na Calcutta.
1931: Gonxha kwere nkwa mbụ ya, na aha ya "Teresa," maka onye nchebe nke ndị ozi ala ọzọ.
1937: Gonxha, nke bụ Mary Teresa, kwere nkwa ikpeazụ ya nke ịda ogbenye, ịdị ọcha, na nrubeisi ma werekwa aha ahụ bụ "Mama."
1946 (Septemba 10): Mama Teresa natara oku sitere n'aka Chineke ka ya na "ndị ogbenye kachasị daa ogbenye" ​​rụọ ọrụ.
1948: Mama Teresa ghọrọ nwa amaala India ma nwee ọzụzụ ahụike dị mkpirikpi mana dị mkpa iji kwalite ọrụ ya.
1950: Mama Teresa natara ikike na Vatican iguzobe usoro okpukpe ọhụrụ, ndị ozi ala ọzọ nke ọrụ ebere.
1953: Ndị ọhụụ mbụ nke ndị ozi ala ọzọ nke Charity kwere nkwa mbụ ha.
1963: E guzobere ndị ozi ala ọzọ nke Charity Brothers.
1965: Mama Teresa natara Iwu Otuto site n'aka Pope John Paul VI.
1969: Ndi Co-Workers biara na ndi mgbasa ozi ala ọzọ.
1979: Mama Teresa natara Nobel Peace chọr'inwe.
1983: Mama Teresa nwere nkụchi obi mbụ ya, na Rome.
1989: Mgbe mama Teresa nwụsịrị ọrịa obi nke abụọ, etinyere onye na-eme ngwa ngwa.
1997 (Septemba 5): Mama Teresa nwụrụ mgbe ọnya obi nke atọ gasịrị, oge a na Calcutta, India. A hoputara Nwanna Nirmala ka ọ nọchie anya mama Teresa.
2009: Nwanyị nwanyị Mary Prema nọchiri Nwanna nwanyị Mirmala dị ka onye isi nke ndị ozi ala ọzọ nke Charity.
A mụrụ nne Teresa Agnes Gonxha Bojaxhiu, August 26, 1910, na Skopje, Macedonia, na mpaghara Ottoman. Bọchị mgbe amụrụ ya, mgbe e mere ya baptizim na Roman Katọlik, ghọrọ ụbọchị ọ mechara mata na ọ bụ ezi ọmụmụ ya. Nna ya, Nikola, onye Albanian, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo na onye na-akwado nnwere onwe Albania, nwụrụ na mberede mgbe Agnes dị afọ asatọ, ikekwe n'ihi nsị na-emetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nne ya, Drana, onye a kọwara dịka nwanyị nwere ọmịiko na mmesapụ aka n'agbanyeghị ịda ogbenye nke ezinụlọ ya, raara onwe ya nye n'ịzụ ụmụ ya dị ka ndị Roman Katọlik ji okpukpe kpọrọ ihe. O kwusiri ike na onye ọ bụla kwesịrị inyere ndị ọzọ aka tupu ha enyere onwe ha aka (Greene 2008: 6).
Agnes dị afọ iri na abụọ mgbe ọ na - aga njem ụka kwa afọ na plọ Akwụkwọ Chapel nke Black Madonna, ọ na - akọ na ọ nwere “ọkpụkpọ” bie ndu ya maka Chineke ma jekwara ndi ozo ozi. Mgbe nwatakiri na ntorobia tinyechara aka na ihe omume ulo uka, gunyere ndi ukwe, na-egwu egwu mandolin, isonye na otu ndi ntorobia, ya na ikuziri ndi ntorobia akuko, na 1928, mgbe o gbara afo iri na asato, Agnes hapuru ulo ya ka o sonye na Loreto Istersmụnne nwanyị nke Dublin. O buru ụzọ gaa France ka a gbaa ya ajụjụ ọnụ, mgbe ọ hụrụ na ọ dabara adaba, e zigara ya Ireland ebe ọ mụrụ asụsụ Bekee wee were aha ahụ "Mary Teresa," maka Saint Therese nke Lisieux, onye nchebe nke ndị ozi (Greene 2008: 17-18) ). Na 1929, n'oge ọhụụ ya, e zigara ya na Calcutta, India, iji kụzie ihe na St Mary's High School for Girls. N’oge ya dị ka onye novice, ọ mụrụ asụsụ Bengali na Hindi, kuziri nkuzi ala na akụkọ ihe mere eme, ma were nkwa mbụ ya na 1931. Mgbe ọ gbara nkwa ikpeazụ ya maka ịda ogbenye, ịdị ọcha, na nrubeisi na 1937, ọ kpọkwara aha “Mama, ”Iji buru Teresa ụzọ, dị ka ọ dị na omenala ndị Loreto Sisters.
Mama Teresa gara n'ihu na-akụzi na St Mary's High School maka Girlsmụ agbọghọ ruo mgbe emere ya onye isi na 1944. Ahụmahụ ya na ụlọ akwụkwọ ahụ nyere ya echiche doro anya, echiche onwe onye banyere ịda ogbenye gbara ya gburugburu, na 1946 n'ụgbọ okporo ígwè si Calcutta ruo Darjeeling, ọ natara "oku n'ime oku," site na Kraịst, onye gwara ya ka ọ hapụ ụlọ akwụkwọ ahụ ma soro "ndị ogbenye kachasị daa ogbenye" ​​rụọ ọrụ, ndị enweghị enyemaka, enweghị olileanya, na naanị. Dika akuko omuma ya si di, Chineke gwara ya na ya erughi ka mmadu obula, na choro nwanyi dika ya nke ga enyere ndi n’enweghi enyemaka aka. N'iburu nkwa ya nke irubere Chineke na Chọọchị Roman Katọlik isi, mama Teresa enweghị ike ịkpọ oku a ruo mgbe Vatican kwadoro ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ mgbe e mesịrị (Van Biema 2007). Ọ mechara bụrụ nwa amaala India iji nwee ike ịnata ọzụzụ ọzụzụ na Calcutta. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, mama Teresa biri ma soro ndị na-enweghị ego na-arụ ọrụ.
Ka ọ na-erule 1950, mgbe m rụchara ọrụ na mkpọmkpọ ebe nke Calcutta, hiwe ụlọ akwụkwọ ghere oghe maka ụmụaka, na-enye aka n'ịgụ akwụkwọ nke ndị okenye dara ogbenye, wee mepee ụlọ maka ndị na-anwụ anwụ, mama Teresa enwetawo ego yana nkwado obodo. O nwetara ikike na Vatican ịmalite iwu nke ya na ụmụ nwanyị iri na abụọ ndị ọzọ bụbu ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị nkuzi na St Mary's High School for Girls na Calcutta. A kpọrọ ha “ndị ozi ala ọzọ nke obi ebere,” a makwaara ha maka nkwa nke anọ. Mgbe nkwa nke ịda ogbenye, ịdị ọcha, na nrubeisi, ụmụnne nwanyị nke iwu ọhụrụ a kwekwara nkwa "iji obi dum na ọrụ n'efu nye ndị dara ogbenye" ​​(Greene 2008: 48). Pope John Paul VI nyere ndị ozi ala ọzọ nke Charity Iwu otuto na 1965, nke mere ka iwu ahụ gbasaa n'ụwa niile. Site n'enyemaka nke ndị nkịtị haziri ahazi na ndị kwesiri ntụkwasị obi, ndị akpọrọ Co-Workers, ndị ozi ala ọzọ nke Charity mepere ihe karịrị ụlọ ọgwụ isii, ụlọ akwụkwọ, ọrụ ndụmọdụ, ebe nlekọta ahụike, ebe obibi na-enweghị ebe obibi, ụmụ mgbei, na mmemme maka mmanya na ọgwụ ọjọọ riri ahụ n'ihe karịrị mba 600 120. Ndị ozi ala ọzọ ahụ nyere aka rute mba dị na mpaghara isii nke kọntinenti asaa site na enyemaka ha.
Mgbe ọtụtụ afọ gasịrị n'ụlọ ọgwụ na nsogbu obi n'ime afọ iri gara aga, mama Teresa nwere nkụchi obi wee nwụọ na Calcutta na Septemba 5, 1997 n'ihi obi, akụrụ, na nsogbu akpa ume. A hoputara Nwanne nwanyị Nirmala ka ọ nọchie anya mama Teresa ma jee ozi dịka onye isi nke ndị mgbasa ozi nke obi ebere ruo na 2009 mgbe Nwanna nwanyị Mary Prema ghọrọ onye ndu nke ndị mgbasa ozi-ọma. Ndị na-anọchi anya mama Teresa na-aga n'ihu na-ekwupụta dị ka ndị ozi ala ọzọ na-enye ndị kacha mkpa enyemaka n'efu (Greene 2008: 139).
Dị ka iwu nke Chọọchị Roman Katọlik, ndị ozi ala ọzọ nke Charity na-agbaso ozizi na nkwenkwe nke Chọọchị. Dị ka ọtụtụ iwu ndị Katọlik ndị ọzọ, ndị ozi ala ọzọ nke Charity kwenyere na ịdọ aka ná ntị na ịchụ onwe onye n'agha, ịjụ ịhapụ ụwa ọzọ, na ịdị elu nke Pope (Johnson 2011a: 58-84). Na mgbakwunye na nkwenkwe Roman Katọlik na ozizi ndị ọzọ ịhapụ iwu, ndị ozi ala ọzọ nke Charity na-ekwe nkwa nke anọ, iji obi ha dum na-ejere ndị dara ogbenye kachasị. Ọ bụghị ihe mgbaru ọsọ nke ndị ozi ala ọzọ nke Charity iji dozie ihe ha nwere ike ịhụ dị ka nsogbu mmekọrịta ọha na eze, kama ọ bụ isoro ndị na-ata ahụhụ n'ihi nsogbu ndị a, na ịnweta ịhụnanya Chineke site na ọrụ na ịda ogbenye ha (Greene 2008: 54) -55). Emume na ọdịnala nke ndị ozi ala ọzọ nke Charity dị ọtụtụ, emebere iji hụ na etinyeghị oge na frivolity. Ndị ozi ala ọzọ kwenyere na ha kwesịrị izere ọnwụnwa mgbe ha nọ n'ụwa; iji mee nke a, a na-atụ anya ka ndị nwanyị na-ejide "ikike nke uche," ma ọ bụ zere ịhụ, ịnụ, ma ọ bụ imetụ ihe ọ bụla na-adịghị mkpa (Johnson 2011a, 2011b).
Dị ka Chọọchị Roman Katọlik nke nne Teresa si zụlite ya, ndị ozi ala ọzọ nke Charity na-agbaso usoro emume ndị dị iche na Katọlik na okpukpe ndị ọzọ Ndị Kraịst, yana ọdịnala ọdịnala ha nke dị iche na okwukwe Roman Katọlik na-emebiga ihe ókè. Omenala anọ kachasị bụrụ ebe ụka Katọlik bụ emume Oriri Nsọ, ekpere Rosary, Confession na Absolution.
Oriri Nsọ, ma ọ bụ Oriri Nsọ dị nsọ, a na-eme n’emume ọ bụla Katọlik. Achịcha (ma ọ bụ wafer) na mmanya na-anọchi anya ahụ na ọbara nke Kraịst ma wegara ndị ụkọchukwu, ndị nyeferela onwe ha na Chọọchị n'ụzọ ndị ọzọ, wee bụrụzie ndị otu ụmụ nwanyị ndị gosipụtara na Chọọchị Katọlik. Ekwenyere na n'oge a nke udo, transubstantiation na-eme, mgbanwe nke achịcha na mmanya gaa ezi ahụ na ọbara nke Kraịst. Omenala a bụ egwuregwu Akwụkwọ Nsọ Nri Anyasị nke Kristi na ndị na-eso ụzọ ya.
Ejiri ekpere Rosary eji ekpe ekpere. A na-ahụ oke ọ bụla site na ịkọgharị ọnụ iji gosipụta ekpere ndị a kapịrị ọnụ, Nna Anyị, Ekele Mary, ma ọ bụ Ebube. Ntughari ekpere a, nke Rosary na-akwado ya ka eji maka ekpere na ntughari uche na Mysteries of Christ, tinyekwara penance dika akwadoro mgbe emechara nkwuputa.
Sacrament nke ime udo, ma ọ bụ nkwupụta, bụ oge a na-enye ndị ụkọchukwu, ndị nyeferela ndụ ha ụka, na ndị nkịtị, ma ọ bụ ndị chegharịrị, ohere ikwupụtara onye ụkọchukwu mmehie ha n’otu n’otu. Mgbe onye chegharịrị kwupụtara ma gosipụta mwute maka mmehie ya, ụkọchukwu ahụ nwere ike ịnye omume nke nchegharị, nke nwere ike ịgụnye ikpe ekpere ma ọ bụ omume ọzọ iji baara obodo uru ma ọ bụ ịnwa imezi ihe ọjọọ. Mgbe a nụchara nkwupụta ahụ, onye ụkọchukwu na-enye Nkwupụta, ma ọ bụ hapụ nchegharị nke mmehie ya. N'etiti ọtụtụ emume na ọdịnala ndị ọzọ kwa ụbọchị, ndị ozi ala ọzọ nke Charity na-ekpe ekpere Act of Contrition nightly.
Ememe ndi ozo di iche na ndi ozo nke ndi uka Katoliki bu ememe abuo- oriri ndi mmadu na nke ubochi. Ememme Society, nke a na-eme n’abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Ọgọstị nke afọ ọ bụla, bụ emume Obi Immachibidoro Meri, onye nlekọta ha. Bọchị Inspiration, nke a na-eme kwa afọ na Septemba 22, bụ ụbọchị ncheta ụbọchị ahụ mama Teresa natara oku ya ka o jiri obi dum na-arụ ọrụ na ndị ogbenye ọnụ ntụ. Omenala ọzọ kwa afọ bụ mgbagha ụbọchị asatọ. Na mgbakwunye na izu ike izu ike na mmeghari ohuru, onye ụkọchukwu na-ekwu okwu kwa ụbọchị na nkwupụta izugbe na-ahụ maka ịlaghachi azụ (Johnson 10a, 2011b).
Isi nke Mmejọ bụ omume a na-eme kwa ọnwa mgbe ndị ozi ala ọzọ nke Charity gbakọtara iji kwupụta ma rịọ mgbaghara maka mmejọ ọ bụla ha mere n'ime ọnwa ahụ. Nwanne nwanyị ọbụla gbue ikpere n’ala, n’otu n’otu, sutụ aja ọnụ, kwupụta mmejọ ya, ma sutukwa ụlọ ahụ ọzọ. Omenala ọzọ a na-eme kwa ọnwa bụ nke a maara dị ka “mmeghari ikike.” Nwanna nwanyị ọ bụla na-ehulata ala n'ihu onye ka nke ya elu, susuo ọnụ n'ala, kwupụta mmejọ ya, ma rịọ ikike maka iji ihe onwunwe. Na mgbakwunye na Isi nke Mmejọ, ndị Sista ahụ na-emekwa mmehie n'ihu ọha maka mmehie ha. Nke a nwere ike ịgụnye ịrịọ maka nri wee rie ya ikpere, metụ ihu mmadụ aka n'ụkwụ nwanne nwanyị ọ bụla, isusu ọnụ ụzọ nke Nwanne nwanyị ibe ya, ma ọ bụ ịgụghachi Paters. Otu ugboro n'izu, ndị Sista ahụ na-ahụ "ụbọchị n'ime," oge ezumike na nzukọ obodo. N'ụbọchị a n'ịchịkọta, ntụgharị uche, ọrụ ndịozi, na ntuziaka nke ndị ka elu ka a na-ekerịta n'ime obodo. Otu ugboro n'ọnwa, otu ụbọchị na-raara nye a ụbọchị nkịtị nke ncheta.
Na nchegharị anụ ahụ kwa ụbọchị, ndị nwanyị na-eyi agbụ gbara gburugburu n'úkwù ha na ogwe aka elu maka ọ dịkarịa ala otu awa. Mụnna nwanyị ahụ na-agụkwa akwụkwọ ime mmụọ site na akwụkwọ ndị isi nke Order ahụ kwadoro, n'otu n'otu, ma ọ bụ na obodo mgbe ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Ma ọ bụghị ya, ndị Sista ahụ na-arụ ọrụ ma na-adị jụụ belụsọ n'oge nri na obere oge ezumike. Nke a bụ iji nye nwanyị ọ bụla ohere isoro Chineke nwee nkwukọrịta. Ndị ozi ala ọzọ nke Charity na-eme rosary nke ha, na-ekpekwa ha ekpere kwa ụbọchị, ọbụlagodi mgbe ha na-aga n'okporo ụzọ ma ọ bụ na-ekere òkè n'ọrụ ụbọchị.
Kwa ụtụtụ na abalị, onye ka elu na-agọzi Nwanne nwanyị ọ bụla site na itinye aka n'isi ya n'isi, na-asị "Chukwu gozie gị na blue par sari." Mgbe ha na-eteta kwa ụtụtụ, ndị nwanyị na-etinye otu awa na Ekpere Morning, nke gụnyere ekpere ndị a na-agụ site na akwụkwọ a kapịrị ọnụ na Order. Smụ nwanyị ahụ na-atụgharịkwa uche, nke sitere na St Ignatius, bụ mgbe ha na-ahụ onwe ha n'otu ihe sitere na Oziọma ahụ. Ntụgharị uche a, nke a na-ebu ụzọ obere ekpere maka mkpalite mmụọ nsọ, na-ewe ihe dị ka ọkara elekere. Mgbe ha tụgharịrị uche, ụmụnne nwanyị ahụ jiri olu dara ụda kpee ekpere maka Virgin Mary wee kpee ekpere St. Ignatius nke a kpọrọ Suscipe. Tupu nri ọ bụla, ndị Sista ahụ na-agụpụta amara dị ka obodo, na ugboro atọ n'ụbọchị, na oku na nzaghachi ụdị, yana mgbịrịgba mgbịrịgba, ha na-agụ Angelus, ekpere ọdịnala na ncheta mgbanwe dị n'etiti mmụọ ozi Gabriel na Nwa agbogho Mary. Kwa ụbọchị, ndị Sista ahụ na-agụ akụkụ ụfọdụ nke Little Office of the Immaculate Design, na-eto Mary. A na-etinye otu awa kwa ụbọchị na nsọpụrụ na monstrance n'ihu Oriri Nsọ, na-ekpekwa ekpere tupu na Oriri Nsọ.
Dị nnọọ ka ụdị ntụgharị uche ha si dị ka nke St Ignatius, ndị Sista ahụ na-agbakwara site na ọdịnala ya na nyocha nke akọ na uche, ma ọ bụ nyocha. Ugboro abụọ kwa ụbọchị, ndị Sista ahụ na-eleta ụlọ ụka ahụ iji tụgharịa uche na oge ha nọrọ kemgbe nyocha ikpeazụ, wee tụgharịa uche n'omume ọma a ga-eme ma ọ bụ mee iji zere na Nwanna nwanyị ahọrọla ka ọ bụrụ elebara anya maka ọnwa ma ọ bụ afọ. Nyocha mbụ nke ụbọchị nke akọ na uche bụ akụkụ nke Ekpere etiti ehihie, n'oge nke ndị Sista na-ezukọ na plọ ekpere ma kpee ekpere ọnụ tupu ma ọ bụ mgbe nri ehihie. Na mgbede, ndị nwanyị na-amata oge a na-akpọ Vespers. Ekpere Anyasị a bụ akụkụ nke Liturgy of the Awars, tinyere abụ ọma na Magnificat. Smụnna nwanyị na-agaghachi n'ụlọ ụka ahụ mgbe ha risịrị nri abalị iji kpee ekpere, ma enwere ekpere abalị mgbe a na-enyocha mmadụ ọzọ, ụmụ nwanyị ahụ na-esonyekwa n'ekpere olu. Smụnna nwanyị na-agụghachi Paters tupu ha lakpuo ụra, nke gụnyere Act of Contrition, Nna Anyị, Hail Marys, na Glory Be. N'ikpeazụ, ndị nwanyị na-agwụ n'abalị ha na Silence, nke na-anaghị akwụsị ruo ụtụtụ echi (Johnson 2011a, 2011b).
Ndị ozi ala ọzọ nke Charity malitere na mmadụ iri na abụọ. Na 1963, otu kwekọrọ
e guzobere otu ndị Nwanyị, Ndị ozi ala ọzọ nke Charity Brothers. Afọ atọ gachara Fr. Ian Travers-Ball (Nwanna Andrew), onye ụkọchukwu Jesuit si Australia weere idu ndú nke Brothersmụnna ahụ ma duzie ìgwè ahụ n'ime afọ iri abụọ mbụ nke akụkọ ntolite ya. E hiwere ngalaba nke iche echiche nke ndị mgbasa ozi-ọma nke Charity, ụmụnne nwanyị na ụmụnne nwoke na 1976 na 1979, n'otu n'otu, ma tinyekwara aka n'ekpere, nchegharị na ije-ozi. Ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị n'alaka ụlọ ọrụ ndị na-atụgharị uche na-agụnye oge dị ukwuu ewepụtara maka ekpere, ọgụgụ ime mmụọ, na ịgbachi nkịtị. E guzobere Corpus Christi Movement for P oku na 1981, mgbe ọtụtụ ndị ụkọchukwu gosipụtara mmasị. N'ikpeazụ, na 1984, mama Teresa soro Friar Joseph Langford soro ndị ozi ala ọzọ nke Charity Fathers. Organizationstù ndị ọzọ jikọrọ aka na ndị ozi ala ọzọ nke Charity gụnyere ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ nke mama Teresa, Ndị Ọrụ Na-arịa Ọrịa na Ahụhụ, na The Lay Missionaries of Charity (Greene 2008: 140).
Dị ka "onye guzobere" nke ndị ozi ala ọzọ nke ọrụ ebere, mama Teresa bụ Ọchịagha Kasị Elu ruo obere oge tupu ọnwụ ya. Onye isi General họpụtara site na Isi General, nke gụnyere ndị ahọpụtara na ndị otu ahọpụtara. Kwa afọ isii Isi General na-ezukọ iji nyochaa ma nyochaa ọrụ nke ndị mgbasa ozi-ọma. Ndị a họpụtara nke Isi General gụnyere Superior General, Ex-Superior General, Ndụmọdụ General, na ndị isi mpaghara. Ndị ahọpụtara ahọpụta gụnyere ndị nnọchi anya si mpaghara niile ekpuchiri, yana ndị nnọchi anya ụmụnna nwanyị ndị na-ahụ maka nhazi (Johnson 2011a, 2011b). A na-atụ anya ka ndị nwanyị na-asọpụrụ mkpebi nke ndị isi ha n'ihi ekpere, ya mere, a na-ahụ mkpebi ndị a dị ka okwu Chineke. Onye isi ndị isi na-elekọta ndị ozi ala ọzọ nke Charity, ndị Roman Katọlik, ndị ọ bụghị nanị na ha na-ekwe nkwa ịda ogbenye, ịdị ọcha, na nrube isi, kamakwa "iji obi dum na ọrụ n'efu nye ndị dara ogbenye." Osisi atọ ndị nke ọzọ nwere ndị isi ha na Superior Generals.
Iji bụrụ Nwanyị Nwanyị nke ndị mgbasa ozi ọma nke Charity, ọnwa isii ndị mbụ nọrọ na nchekwube, na-arụ ọrụ ma na-amụ iji mee ka ntinye na nghọta nke usoro ahụ dịkwuo elu. Gbaso oge nke ịchụso mmụọ nwere otu afọ nke postulancy, nke gụnyekwara ịrụ ọrụ na ịmụ ihe, na, maka oge mbụ, yi sari ọcha. Afọ nke postulancy na-esote afọ abụọ dị ka ndị ọhụụ, nke mbụ gụnyere ụbọchị ekpere na ọmụmụ ihe zuru oke yana nke abụọ gụnyere ịrụ ọrụ na ịmụ ihe. Oge ikpeazụ ọhụụ na-anọ afọ isii, n'oge nke ndị ọhụụ na-ewe nkwa nke nwa oge nke ịdị ọcha, ịda ogbenye, nrube isi, na iji obi dum na ọrụ n'efu nye ndị dara ogbenye. Novitiate ahụ amalite iyi akwa sari ọcha nwere oke na-acha anụnụ anụnụ. A na-akpọ ọmarịcha ọrụ na ọrụ ndị ọzọ, akpọ ya Nwanna Nwaanyị, ma na-ekwe nkwa ya kwa afọ. Ka ọ na-erule afọ nke isii, ọhụụ na-eyi akwa sari na-acha anụnụ anụnụ wee were nkwa ikpeazụ ya (Johnson 2011a, 2011b).
Ka ọ na-erule oge nne Teresa nwụrụ na 2007, ndị ozi ala ọzọ nke Charity etoola na ụmụ nwanyị nwanyị ise, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị ụmụnna ise, na ihe karịrị ọrụ 600, òtù ọrụ ebere, ebe obibi, na ụlọ akwụkwọ na mba 120.
Ndị ozi ala ọzọ nke Charity, na mama Teresa n'onwe ya, anatala otuto na nkatọ. Nkatọ ndị Nne nke Obi itytọ na Nne Teresa gụnyere mkpughe nke ogologo oge nke okwukwe ya n'agbanyeghị na ọ na-egosi onwe ya na ọ na-arụ ọrụ Chineke, ebubo nke ịnara onyinye sitere na isi iyi ndị na-enweghị mgbagha na ịba ụba ego na ntọala ụlọ akụ karịa itinye ego. ha nyere ndị ogbenye aka. Nkatọ dị iche iche agbanyeghị, mama Teresa abụrụla onye a na-asọpụrụ site na ọnụ ọgụgụ ụwa na ndị mmadụ nkịtị nke okwukwe niile gburugburu ụwa.
Nsogbu okwukwe nke mama Teresa ghọrọ nke ọha na eze n'ihi akwụkwọ ozi nke aka ya, bipụtara ya na 2003. O doro anya na nsogbu a bidoro n'etiti 1940s mgbe ọ na-arụ ọrụ na mkpọmkpọ ebe Calcutta ma guzobe ndị ozi ala ọzọ nke Charity. Dabere na akwụkwọ ozi ndị ahụ, nsogbu a nke okwukwe gara n'ihu n'oge ndụ ya niile, ọbụlagodi na ọ rụrụ ọrụ na nzaghachi "oku a kpọrọ." Mama Teresa ji enweghị okwukwe ya, mmetụta nke ịhapụ Kraịst, na-atụnyere hel. Mgbe ụfọdụ, ọbụnadị mgbe ọ na-arụ ọrụ n'aha Chineke, ọ kọrọ na ya nwere obi abụọ na Chineke adịghị. Ọ bụ ezie na mama Teresa rịọrọ ka e bibie akwụkwọ ozi ndị nwere nnabata ndị a, ndị nkwupụta ya na ndị isi ya asọpụrụghị ọchịchọ ya, e bipụtakwara ha na Nne Teresa: Bịa Bụrụ Ìhè M (Van Biema 2007). N’otu akwụkwọ o degaara Rev. Michael Van Der Peet na Septemba, 1979, o kwuru na “Jizọs hụrụ gị n’anya pụrụ iche. Ma mụ onwe m, ịgbachi nkịtị na ihe efu dị ukwuu nke na m na-ele anya na anaghị ahụ, na-ege ntị ma anaghị anụ "(Van Biema 2007). O nwere ike ịbụ na a kọwaara ya ọrụ ya dị ka ihu abụọ agbanahụghị ya, ọ kọwara ọkara afọ narị ya na-arụ ọrụ na-enweghị okwukwe dị ka ụzọ ụfọdụ '' mmekpa ahụ. ''
Esemokwu nke abụọ esorowo ndị ozi ala ọzọ nke ọrụ ebere bụ ebe ha si enweta ego na iji onyinye ebere. A kọrọ na mama Teresa nwetara ego maka ihe kpatara ya site na isi okwu ndị na-enweghị mgbagha, gụnyere ezinụlọ Duvalier nke Haiti na Charles Keating, onye bụ isi na mkparị "The Keating Five" nke metụtara ebubo nke nchebe na-akwadoghị nke Keating site na United ise Ndị Omeiwu Steeti n'oge ọgba aghara na mgbazinye ego 1980s. E boro ndị ozi ala ọzọ ebubo na ịhapụ na ileghara ọnọdụ ndị jọgburu onwe ha iji nọgidesie ike na ụlọ ọrụ ndị Charity na-akwado, dịka ụlọ ọgwụ na ụmụ mgbei, ebe ha jụrụ ịme ndekọ ọha na eze banyere mmefu ego ha iji kwado ụlọ ọrụ ndị a (Hitchens 1995). Dị ka otu onye nkatọ si kọọ, "Onyinye ndị a tụbara ma debe ha n'ụlọ akụ, mana ha enweghị mmetụta na ndụ anyị na-atụ egwu na obere mmetụta na ndụ ndị ogbenye anyị na-agba mbọ inyere" (Shield 1998). Onye nkatọ ọzọ boro ebubo na ụlọ maka ọnwụ nke ndị ozi ala ọzọ nke Charity mara maka enweghị ndị dọkịta iji chọpụta ọrịa nke ndị ọrịa, na-eji ọgwụ mgbochi hypodermic emeburu ma ọ bụ nke na-adịghị ọcha, na-ajụ inye ndị na-egbu mgbu ihe mgbu. ma ọ bụghị ịdabere na usoro ọgwụgwọ oge ochie na nke dị ize ndụ (Fox 1994). Otu onye ọrụ afọ ofufo zoro ezo dere akụkọ banyere mmeso ọjọọ a na-emeso ụmụaka; ọ na-akọ na ọ hụla ka ụmụaka agbụ, na-eri nri, ma pụọ ​​n'èzí n'abalị n'oge udu mmiri (MacIntyre 2005). Na mgbakwunye na nkatọ sitere n'aka ndị ọrụ ahụike na ndị nta akụkọ nyocha, ndị ọrụ ibe mbụ na ndị nwanyị bụbu ndị nwanyị na ndị ozi ala ọzọ nke Charity, gụnyere Colette Livermore (2008), edewo akụkọ yiri nke ahụ banyere adịghị mma nke nhụjuanya nke ndị nwanyị ahụ nyere aka nyere aka. . Dabere na Fox (1994), ndị ozi ala ọzọ nke Charity gosipụtara ihe ga-eyi ka ọ bụ ịga n'ihu nke nhụjuanya nke ndị nọ ná mkpa, ndị a hapụrụ, na ndị e wedara n'ala, dị ka na-egosipụta nkuzi nne mama Teresa na nhụjuanya na-eme ka mmadụ bịarukwuo Jizọs nso. O kwuru na o gosipụtara nhụjuanya mmadụ na nke Kraist wee bụrụ onyinye. Nke a "nkà mmụta okpukpe nke nhụjuanya," emeela ka ndakpọ olileanya dị n'etiti ọtụtụ ndị bụbu ndị ọrụ ibe na Sista (Livermore 2008), ma mee ka e nwee obi abụọ banyere òtù dị iche iche na-ekwe nkwa nke anọ nke "iji obi dum na ọrụ n'efu nye ndị dara ogbenye. ”
Mkparịta ụka ikpeazụ bụ ma nne Teresa kwesịrị ka a na-akụ ya ihe ma na-achịkwa ya yana ma a na-edozi ya n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na Vatican na-akwalite ya n'ụzọ na-enweghị isi na nzaghachi nnukwu ewu ewu nke mama Teresa. Ọ bụ ezie na Vatican enweghị ike ịmalite usoro iti ihe ruo mgbe afọ ise gachara mgbe nwa akwukwo ahụ nwụsịrị, Holy See, nke Pope John Paul II na-achị, malitere usoro a na 1997. A kụrụ ya ihe na 2003, na-eme ka ndị Katọlik mara ya dị ka "Onye A gọziri agọzi" Mama Teresa. Holy See hapụkwara nyocha nke nsogbu, usoro iji nyocha ọrụ ya pụrụ iche. Ọrụ ebube abụọ, nke metụtara ịrịọchitere onwe ya nke mama Teresa, ka achọrọ dịka akụkụ nke usoro ịtụle maka ịdị nsọ. Enwere ugbu a naanị otu ọrụ ebube, nke nwanyị Bengali mere nke na-ekwusi ike na a gwọrọ ya n'ụzọ ọrụ ebube mgbe o jidere otu akpa na foto nke mama Teresa na afọ ya. Otú ọ dị, a na-azọrọ nkwupụta a dị ka di nwanyị ahụ na dọkịta dibịa na-ekwusi ike na a gwọrọ cysts nwanyị ahụ mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ nke ọgwụ na ọgwụgwọ (Rohde 2003).
Ọ bụ ezie na e nwere ndị na-azọrọ na ihe ọrụ mama Teresa abụghị nke ebere dịka ndị ọkaibe na-ele ha, o doro anya na site na mbọ ya zuru ụwa ọnụ
na òtù dị iche iche, ọ ghọwo onye ama ama na ndị a hụrụ n'anya nke ukwuu na India, obodo Katọlik, na ụwa niile. N'afọ 1971, mama Teresa natara Nobel Peace chọr'inwe maka “iweta ihe a kpọrọ mmadụ na-ata ahụhụ.” Enyere ya nkwanye ugwu dịka India Padma Shri na Jawajarlal Nehru Award maka International Understanding, England's Order of Merit, Gold Medal nke Soviet Peace Committee, United States Congressional Gold Medal, yana ihe karịrị otu narị onyinye ndị ọzọ, gụnyere asọpụrụ Ọkwa sitere n'ọtụtụ mba na ụlọ ọrụ ndị ọzọ maka mbọ ya na ndị ozi ala ọzọ nke Charity. Ikekwe ngosipụta kachasị dị mma nke ịkwanyere mama Teresa ùgwù bụ na a họọrọ ya na mbụ na United States '1999 Gallup Poll's Ndepụta nke Ndị Kasị Amara Ọtụtụ Ndị na narị afọ nke 20, n'ihu ihe ọkụkụ dịka Martin Luther King, Albert Einstein, na Poopu John Paul nke Abụọ.
Fox, Robin. 1994. "Nlekọta nke Mama Teresa maka Ọnwụ." The Lancet 344 (8925): 807.
Greene, Meg. 2008. Mama Teresa: A Biography. Mumbai, India: icolọ Mbipụta Jaico.
Hitchens, Christopher. 1995. Ọnọdụ Ndị Ozi Ala Ọzọ. London: Ntughari.
Johnson, Mary. 2011a. Akpịrị ịkpọ nkụ: Na-eso mama Teresa n'ịchọ Lovehụnanya, Ọrụ, na Ezigbo Ndụ. New York: Spiegel na Grau.
Johnson, Mary. 2011b. "More banyere MCs." 2011. Nweta site na http://www.maryjohnson.co/more-about-the-mcs/ na 10 December 2012.
Livermore, Colette. 2008. “KERA na-eche Podcast: vinghapụ mama m Teresa, Okwukwe ya, na ingchọ Nzube. ” 15 Disemba 2008. Nweta site na http://www.podcast.com/I-451506.htm na 12 December 2012.
MacIntyre, Donal. 2005. "Eziokwu na-abaghị uru nke kpatara mama mama Teresa." NewStatesman. 22 August 2005. Nweta site na http://www.newstatesman.com/node/151370 na 12 December 2012.
Rohde, David. 2003. "Ihe Nketa ya: Nnabata na obi abụọ nke ọrụ ebube." The New York Times. 20 October 2003. Nweta site na http://www.nytimes.com/2003/10/20/world/her-legacy-acceptance-and-doubts-of-a-miracle.html na 15 December 2012.
Sheilds, Susan. 1998. "Motherlọ nke Agụụ Mama Teresa: Otu O Si Emerụ Ndị Na-enyere Ya Aka Na Ndị Ha 'Nyeere Aka." Akwụkwọ akụkọ na-enye n'efu Nweta site na http://www.secularhumanism.org/library/fi/shields_18_1.html na 10 Disemba 10 2012.
"Nwanyị Nirmala: Mama Teresa nọchiri Agabiga." BBC, Nweta site na http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33234989 na 10 July 2015.
Van Biema, David. 2007. "Nsogbu nke okwukwe nke mama Teresa," TIME, 23 August 2007. Nweta site na http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1655720,00.html na 10 December 2012.